Soomaaliya & Itoobiya oo gaaray heshiiyo dan u ah labada dal. | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Soomaaliya & Itoobiya oo gaaray heshiiyo dan u ah labada dal.
Soomaaliya & Itoobiya oo gaaray heshiiyo dan u ah labada dal.
Muqdisho(SNTV):-Kadib kulan muhiim ah oo maanta muqdisho ay ku yeesheen madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu heshiiyay ilaa 16 qodob oo muhiim u ah xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya.
Previous articleRaiisul wasaaraha Itoobiya oo madaxtooyada Soomaaliya shir kula leh madaxda sare ee Qaranka
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo sagootiyay Abiy Ahmed